Fitohizan'ny hafatra : 365 jours de Paix garantie !
Valiny : 75
fiderranaa - 08/06/2020 05:16
365 jours de Paix garantie ! - https://topmessages.topchretien.com/texte/365-jours-de-paix-garantie/
rhaj0 - 08/06/2020 10:20
fiderranaa respecter les règles établies par les hommes, tant qu’elles ne sont pas contraires à la Parole de Dieu
Ka io izao arakarak'ilay "Parole de Dieu" tiana (ho arahina).
Ezekiela 18: 20 Ny zanaka tsy mba hitondra ny heloky ny rainy ...
Eksodosy 20: 5 ... fa Izaho, Jehovah Andriamanitrao, dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika
Ka IZA, O Iza IZa, iza ry Fiderranaa no arahinao: i Ezekiela sa i Eksodosy?
RBNIR - 09/06/2020 06:00
mazava b ny voasoratra ao anatin'ny Ezekela 18
« Ny amin'ny rainy, noho ny nanaovany an-keriny sy ny nandrobany ny rahalahiny ary ny nanaovany izay tsy mety tao amin'ny fireneny, dia, indro, ho faty noho ny helony izy. » (Ezekiela 18:18)
« Nefa, hoy ianareo: Nahoana moa ny zanaka no tsy mba hitondra ny helo-drainy? Raha ny zanaka manao izay marina sy mahitsy sy mitandrina ny didiko rehetra ka mankatò azy, dia ho velona tokoa izy. » (Ezekiela 18:19)
« Ny fanahy izay manota no ho faty. Ny zanaka tsy mba hitondra ny heloky ny rainy, ary ny ray tsy mba hitondra ny heloky ny zanany; ny fahamarinan'ny marina ho aminy ihany ary ny faharatsian'ny ratsy fanahy kosa ho aminy ihany. » (Ezekiela 18:20)
« Fa raha ny ratsy fanahy miala amin'ny fahotana rehetra izay nataony ka mitandrina ny didiko rehetra ary manao izay marina sy mahitsy, dia ho velona tokoa izy, fa tsy ho faty. » (Ezekiela 18:21)
raha ohatra ka tsy mankasitraka ilay nataon'ny rainy ilay zanaka fa manaraka tsara izay didin'i Jehovah dia afaka tanteraka izy....
Ary raha misy koa olona nanota, nefa nibebaka dia mbola afaka ihany koa izy...
Ka inona no olona amin'izany????
Raha nanota ny rainy ka manaraka azy kosa ny zanany dia mazava hoy azy hihatra aminy izay voasoratra ao amin'ny eksodosy 20
rhaj0 - 09/06/2020 11:26
io Baiboly io Ezekiela 18: 20 Ny zanaka tsy mba hitondra ny heloky ny rainy ...
RBNIR Raha nanota ny rainy ka manaraka azy kosa ny zanany dia mazava hoy azy hihatra aminy izay voasoratra ao amin'ny eksodosy 20
ya ya... tonga dia asian'i YHVH h@ zafindohalika (izay mbola tsy teraka akoriny)
RBNIR - 09/06/2020 16:37
Raha ohatra ka tsy mibebaka ireo taranaka aty aoriana...fa raha mibebaka dia avelan'Andriamanitra ny helok'izireo...
rhaj0 - 09/06/2020 17:36
Dia mbola noraisin'i RBNIr ny tenin'i YHWH, izay supposé hoe "masina" ka tsy azo ampiana tsy azo analana, ary dia nampian-drBNIR @ fahazoany azy.
Efa io mazavabe io hozy YHWH hoe, fa Izy dia "mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka". T@ teny anglisy dia hoe, punishing the children for the sin of the parents fa TSY hoe "for their sins".
Ary TSISY resaka mibebabebaka mihintsy ao @ Exodosy. Fa io moa, toa ny fomban'i RBNIR, izay tsisy maharatsy azy tokoany, dia nampiany resaka ilay izy.
ity fomba ratsin'i RBNIR manosihosy ny maha-masina ny Soratra
savihanao ny teniNY, dia ampianao ny anao, na ampivadinao @ resaka hafa t@ YHWH izay efa lany andro, na tsisy idiran'ny lohahevitra akoriny
Fa tsara fa tohizo ry RBNIR aa.. misy hotr'izany indray ve...
Androany fotsiny dia efa im-piry izao ianao nanao an'io ry RBNIR? Inona ilay resaka "andro farany" teo: hoe "rahefa vita ny fitoriana izay vao tonga ny andro farany", hozy Jesosy, fa hozy RBNIR hoe, DISO Jesosy fa "izao" no andro farany, satria izay no nolazain'i HRNRN angaha.
Dia ahoana izao ny ho resakao @ Jesosy androany hariva ry RBNIR?
Tantarao eto rahampitso ee...
RBNIR - 10/06/2020 04:52
Marina fa ao amin'ny eksodosy 20 dia tsy voaresaka ilay hoe mibebaka...
fa any amin'ny ezekiela 18 kosa no manazava tsara fa raha tsy manaraka ny ataondrainy ny zanany dia ho afaka izy e!
testameta taloha avokoa izany resahina izany...
rhaj0 - 10/06/2020 10:41
Rehefa tena tsisy mihintsy ilay honnetete intelektoalinao ao ry RBNIR, dia tena avelao ianao hilona maimbo lava ao @ hadalanao ao, ary ho hitan'ny olona tsara eo ianao mihahaka lava eto.. @ RBNIR dia tena tsisy maha-"masina" an'io Soratra io, fa tsindrontsindrohana dia afangaroaro sy hosihosena ary toritoriana mivilambilana ao io Baiboly io. @ io ampian-dRBNIR fitonontononana sy fisavisavihana ny anaraNY. Mbo te-Kristiana manaraka an'i KRisty ry RBNIr, dia Jesosy no ao an-dohany HONO, nefa kay YHWH no antsointsoiny.
Fa dia ao ianao izany ry RBNIR aa...
RBNIR - 11/06/2020 12:18
« na dia ao aza ireto telo lahy ireto, dia Noa sy Daniela ary Joba, dia ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinany, hoy Jehovah Tompo. » (Ezekiela 14:14)
« na dia ao aza Noa sy Daniela ary Joba, raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy hahavonjy ny zananilahy na ny zananivavy ireo, fa ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinany. » (Ezekiela 14:20)
Nefa koa Izy nilaza ao amin'ilay eks...hoe « nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko. » (Eksodosy 20:6)
ka takatr'i rhaj0 v ilay izy sa tsia e? sao dia mba tokony hiaiky amin'izay aza i rhaj0 hoe tena mbola isan'ireo olona tsy mbola nahavela hahalala marina aloha hatreto???
rhaj0 - 11/06/2020 13:26
Jereo ny dikany @ teny anglisy an'io Eksodosy 20:5 io:
punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me..
ka IZA ilay "those who hate me"?
1- Ireo "third and fourth generation"
2- sa, "the parents"?
Eritrereto tsara ao ry RBNIR aa...
Raha ilay 1-, dia TSY mitombina, satria ireo "generation" ireo azany mbola TSY teraka akoriny
Dia ilay 2- "the parents" no "who hate me", koa dia mamely ary hamely i YHWH, @ ilay manao hoe "punishing their children".
Ka raha avoitra dia toa izao:
ny alozan'ny toetran'ilay YHWH
Izany ny lojikan'i YHWH. Tsarovy fotsiny fa i Madama Eva no tenda-kanina, nefa ilay zaza vao teraka no kitrakitranin'ilay YHWH ary ataony mihinan'ny paomany (ao @ imazination-ny ao)
Eritereto tsara ao ry RBNIR aaa... ary dia mba asivo honnetete intelektoaly ihany ho'a izy io.
rhaj0 - 11/06/2020 14:28
Dia tsy an-kenatra fa notohizan'i YHWH ao @ Eksodosy 20:6
showing love to a thousand generations of those who love me
Eto koa, dia ny condition sine qua none ny hanehony fitiavana an'ireo generation, dia raha ohatra ireo ka zanaky "OF those who love me"
Ilay ""OF (those)" no lakileny.
RAha ilay zaza generation no tiany "showing love", dia TSY ho nasiana io "of those" io ny fehezan-teny, fa tonga dia asosa hoe
showing love to a thousand generations who loves me
Dia rahefa hitan'i Andrianaivoravelona ny toetran'i YHWH (ratsy), dia novainy kely ny dika-teny.
"mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay tia Ahy"
Izay tokony ho toatoa ny hoe
"mamindra fo NY ZANAKA AMAN-JAFIN'NY olona arivo mandimby izay tia Ahy"
Eritrereto tsara ho'a.. AIZA ilay "of Those"? Naninona no notelomin'i Andrianaivoravelona??
AIZA? O Aiza AIza?
rhaj0 - 11/06/2020 15:25
Dia mampome fa ny loha-hevitra dia hoe "paix garanti" HONO, nefa ny (f)ataon'i YHWH (ao @ imazination-ny) dia ny mamango ny Zaza h@ Zafindohalika.. sy ny zafindohaliky ny zafindohalika..
Fa mbola mahita "paix" ihany ny fanatika @ izany eee...
Ny an-dRBNIR moa dia novainy indray ny fantsin'i YHWH, na ilay fantsy novaina no mody avoitrany
RBNIR - 12/06/2020 05:39
Izao izany no tsy maintsy hiafaran'ny mpanohitra...lsa mitsangana ho fahavalon'Andriamanitra....
Dia ao ianao izany koa...
Takona dia tena takona aminao ilay fitiavany.....
Nefa ngeh ra ny marina matoa ianao mbola afaka mipetsopetsona eto dia noho io fitiavana be fampindrampo io e!
rhaj0 - 12/06/2020 10:44
0- Ka miaiky ve k'lou ianao ry RBNIR fa DISO eee...
1- Miaiky ve ianao ry RBNIR, fa kay novain'i Andrianaivoravelona ny dika-teny, ka noesoriny ilay "of those". Ary dia niova tanteraka ny tenin'i YHWH.
2- Miaiky ve ianao ry RBNIR, fa ny an'i YHWH, dia ny hamango ny taranak'izay TSY manaraka azy no fataony: ny lehibe no miady, ka ny ankizy no voatorotoro
3- Miaiky ve ianao ry RBNIR ny @ HARATSIAN'IZANY TOETRA izany?
4- Miaiky ve ianao ry RBNIR, fa ny anao ao dia TSISY obzektivitia, TSISY fisainana, fa izay nasesika taminao dia averinao bolokiana, ary izay zava-drehetra momba YHWH/Jesosy/Baiboly, dia ataonao tery vay manta ho "tena izy'lay" foana, na dia mivilana na mifangarika na diso na sain'ady na manimba na maimbo azany.
5- Miaiky ve ianao ry RBNIR fa TSY mbo manana ity honnetetia intelektoaly, ka rehefa mba DISO dia miaiky?
ka ahoana? Eny sa tsia ny tsirairay @ ireo teboka 5 ireo?
Sa dia efa miaiky ianao ry RBNIR fa anaovanao bemarenina fotsiny ny resak'eto, dia ny anao ihany no tohizanao asesika, toa ny fanaonao eny ambony alitara ihany?
RBNIR - 12/06/2020 12:52
tsy mitovy isika sy rhaj0 ny tena marina...
Izaho nandray an'ity fanomezam-pahasoavana ity...
I Rhaj0 tsy nandray na inona na inona dia izay hitan'i rhaj0 ihany no hanorenan'i rhaj0 ny rezoneman-draj0...
Izany hoe izaho izany izao otran'ity elisa ato amin'ity tantara ity....dia ianao otran'ilay zatovo...
Nisy zavatra hitan'i Elisa tao nefa tsy hitan'ilay zatovo dia hoy i Elisa hoe "aza matahotra...."
Ka ny ahy re ry rhaj0 efa naverimberiko teto fa matoa aho hoy aho "sahy" milaza fa tena mbola velona any marina tokoa i Jesosy dia satria misy zavatra hiainako ankehitriny tsy hiainan'ny hafa...zavatra fantatro fa tsy fantatry ny hafa....
tahaka amin'ny firesahantsika izao hoy aho no "firesahany" amin'ny olona izay tiany hiresahana.....
rhaj0 - 12/06/2020 13:18
O ry RBNIR.. efa impiry firy ianao no midera-tena ho "miresaka @ Jesosy" izao, nefa ny soratanao eto dia tena kely dia kely ny fitombenany, raha tsy hoe dia tena diso tanteraka mihintsy. Dia i Jesosy savisavihanao ho "miresaka" aminao ao no afa-baraka.
Fa manaiky matoa tsy miteny moa no fiteny, ka dia miaiky an'ireo teboka 5 ireo ihany izany i RBNIR, fa @ maha-(kristiana) kanosa an'i RBNIR, dia tsy mahasahy miteny mahitsy sy mazava hoe Eny izy.
Fa tena mba mihatra tsara aminao koa ho'a ity hafatra ho an'i Midrou ity ee..
Fa dia inona loatra ho'a no tsy ampy ao aminao ao ry RBNIR, no dia miantsampy @ io mpanambaka io ianao ee?... Inona no tsy ampy:
- besoin fondamental? sakafo, securite.... nefa ny harembe-nao arianao any @ HRNRN fotsiny
- besoin fitiavana?... f'angaha i HRNRN hanome anao fitiavana? ny harembe-nao no tiany fa tsy ianao
RBNIR - 14/06/2020 07:53
tsy fiderana tena fa fijoroana vavolombelona fa tena marina fa kay tena mbola velona any marina tokoa i Jesosy ary manatanteraka ireo tehy fikasany izy ankehitriny....
rhaj0 - 14/06/2020 15:59
K'inona ho'a no TSY AMPY aminao ao ry RBNIR?
Ilay TSY ampy "fahalalana" @ Siansa k'lou dia hita be tokoany raha ny mbo resakao ny @ fizika-astronomia (trou noir) na koa biolozia (clone). Fa io moa, ny Siansa aza moa "in progress", ka ianao koa izany mba tokony ho tokony an..
Fa hitako mety TSY ampy aminao koa, dia ilay olona mba "mitarika" anao. Asa ahoana ny r-a-d-nao tao taloha? na koa Ivadinao ao izao? Fa hotry ny hoe, na dia efa lehilahilehibe azany ianao, dia toa manana complexe-na "ondry", mouton de panurge ee... Maninona raha mba midohika @ izay ee?... DIa ampiasaina comme iil faut @ izay ho'a ilay coco fa efa mandroso anie ho'a ny taona(nao) ee..
Fa tsy haiko fa ianao ihany mahalala anao ao ry RBNIR aa... Eritrereto tsara ao. Dia eritrereto miadana ao.
Dia rahefa tonga saina iny ho'a ianao ry RBNIR, dia "aza lasa adala" fotsiny, fa henjana ihany ny miaiky hoe, dia izay taona lasa rehetra izay ve dia tena nivaralila na nataon'ny olona (hrnrn) nivaralila tao foana fotsiny ianao. Tena tsihaitsihay eo raha ho tezitra ianao na malahelo, na menatra na manongo-tena manongo fo sy manongo saina ho'a..
Fa dia iresaho eto foana ihany ee.. mety mba afaka manampy anao ny eto
RBNIR - 15/06/2020 06:59
Ankehitriny v? tsy misy intsony....
Hoy Jesosy hoe « Nefa hoy Izy tamiko; Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko. dia tanterahina amin'ny fahalemena. Koa mainka sitrako ny hirehareha amin'ny fahalemeko, mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. » (2 Korintiana 12:9)
Ary marina io tena tokony ho ampy tokoa ny fahasoavana nomen'Andriamanitra...
« Ary koa, ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vato soa*;[*Gr.perila] » (Matio 13:45)
« ary rehefa nahita vato soa* iray saro-bidy izy, dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy.[*Gr. perila] » (Matio 13:46)
ka averiko aminao ihany rhaj0 raha ankehitriny tsy misy zavatra tsy ampy amiko intsony
Mba te ho tonga amin'izany toerana misy ahy izany v i rhaj0?
rhaj0 - 15/06/2020 10:44
[quote-RBNIR]raha ankehitriny tsy misy zavatra tsy ampy amiko intsony[/quote]
hi hi hi... ilay "fahalalana" ve tena complet ao @ RBNIR ao?
Ohatra, mbola mino tsara ny @ Noah sy ny Sambo de gerany i RBNIR ao io ee?
- TSY ampy fahalalana ny Siansa.. ny Tantara sy Jeogirafia...
mahazaka firy ilay Sambo de gera? na manidina tahak'n'inona ilay vorondolo ampahalala fa maina ny tany?
- TSY ampy fahalalana ny Kristiana namanao.. ny "common sense"...
Aoka tsy ho ridicule intsony isikana hozy Pat Robertson ka hinohino foana izany anganon'i Noah izany
Sa TSY mila "fahalalana" ry RBNIR?
Ohatra, TSY mila mahalala ny fikepokepohan'i HRNRN ny 1/10-katsembohan'ny Mahantra sy Ory ry RBNIR. TSY mila mahalala ny fanapempoana ny Mpino TSY HAHALALA ry RBNIR.
Ary TSY mahalala akoriny nedala izao, fa indray andro any anie izy RBNIR io, ka ho tonga saina, ary ho lasa Atheista sahala @ olona normal rehetra ihany.